पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवस – Nepalpostkhabar
Hemant KC । २४ पुष २०७७, शुक्रबार १०:११ मा प्रकाशित
यो बर्ष पृथ्वीनारायण शाहको २९९ औं जन्मजयन्ती हो । विक्रम संवत् १७७९ साल पुस २७ गते गोरखामा जन्मिएका शाहले आफ्नो शासनकालमा ५० भन्दा बढी भुरे–टाकुरे राज्यलाई जोडेर नेपाल एकीकरण गरेका थिए । २० बर्षको उमेरमै राजगद्दी सम्हालेका शाहले जीवनपर्यन्त एकीकरण अभियान अगाडि बढाएका थिए । उनको यही योगदानको कदर गर्दै पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको थियो ।
पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिन आयो कि प्रत्येक वर्ष, कोही उनको पक्ष र कोही उनको विपक्षमा एक पक्षीय कुरा गर्छन् । यी दुई पक्ष–विपक्षका कुराहरु नेपाली राष्ट्रियता र समावेशी संस्कारको सन्दर्भमा बडो संवेदनशील चर्चा भएको हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका पक्षधरहरुले उनलाई र उनको कार्यलाई राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता र राष्ट्रिय एकीकरणको काम भन्ने गर्छन् । भने उनको विपक्षमा कुरा गर्नेहरुले पृथ्वी नारायणले गोर्खा राज्यको विस्तार गरेको मात्र हो, राष्ट्रिय एकीकरण गरेको होइन भन्छन । अझ भनौँ भने पुर्वाग्रहबाट प्रेरित भई इतिहासको सत्यतथ्यलाई समेत ओझेलमा पारेर वा अतिरञ्जित गरेर आ–आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गर्छन । जसले गर्दा पृथ्वी नारायण शाह र उनको कार्यको कुरालाई यथार्थमा बुझ्न अलमल पर्छन् र बुझे पनि भ्रममा पर्छन ।
तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा सरकारी स्तरबाट कुनै पनि कार्यक्रम नभएपनि विभिन्न राजनीतिक दल, तथा राजावादी संघ संस्थाले राष्टिय एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । नेपाल एकिकरण गरेका राजा पृथ्वी नारायणको स्मरणमा २००७ साल पछि एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर ६२ र ६३ को आन्दोलन पछि राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरिएको छ । केही समयदेखि एकता दिवस मनाउन माग उठेपनि सरकारले कुनै निणय गर्न सकेको छैन । पृथ्वी नारायण शाहले बाइसे र चौंविसे राज्यलाई एकिकरण गरेर वृहत नेपाल बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा पृथ्वी नारायण शाहले दिएका उपदेश अहिलेको अवस्थामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकोले उनको दूरदर्शिताको कदरका लागि भएपनि दिवस मनाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पृथ्वी नारायण शाहप्रति दुई थरी विचार सतहमा नै देखिएको छ । एकथरी भन्छन् उनी मुलुक एकीकरण गरेर आफूलाई राष्ट्र निर्माता बन्न सफल भए भने अर्को थरीले उनलाई पहिचान विरोधी तानाशाहको रुपमा लिने गर्दछन् ।
विगत नै वर्तमानको आधार हो । तर गणतन्त्रवाद आत्मसात गर्ने कतिपय मानिस विगतलाई स्वीकार्न तत्पर छैनन । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राज्यले कज्युस्याईं गरिरहेको छ । कसैकसैको मान्यता छ, एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भनेको शाहवंश वा राजतन्त्रलाई प्रवर्दधन गर्नु हो । दिवस र जयन्ती मनाउने सन्दर्भलाई शाहवंशको जगेर्ना र राजतन्त्र फर्काउनेसँग जोडनु गलत बुझाइ हो । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल र नेपालीहरुका गौरव हुन् । विशाल–नेपाललाई उनले एकीकरण गरेर यस क्षेत्रका स–साना हिन्दु राज्यहरुको अस्मिता जोगाए ।
विगत नै वर्तमानको आधार हो । तर गणतन्त्रवाद आत्मसात गर्ने कतिपय मानिस विगतलाई स्वीकार्न तत्पर छैनन । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राज्यले कज्युस्याईं गरिरहेको छ । कसैकसैको मान्यता छ, एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भनेको शाहवंश वा राजतन्त्रलाई प्रवर्दधन गर्नु हो । दिवस र जयन्ती मनाउने सन्दर्भलाई शाहवंशको जगेर्ना र राजतन्त्र फर्काउनेसँग जोडनु गलत बुझाइ हो । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल र नेपालीहरुका गौरव हुन् । विशाल–नेपाललाई उनले एकीकरण गरेर यस क्षेत्रका स–साना हिन्दु राज्यहरुको अस्मिता जोगाए । अहिले हामी नेपाली भएको र नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको जुन गर्व गर्छाैं त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै देन हो । नेपालमा समावेशी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेत जगाउने समय सापेक्ष दृष्टिकोण उनैले उत्तिबेलै प्रक्षेपण गरेका थिए ।
समय बदलियो, राजनीतिक सन्दर्भ बदलिए, सत्तामा पुग्नेहरु, शक्तिमा रम्नेहरुको अनुहार बदलियो । यो संगै नेपालको एकीकरणको आधार भत्काउने काम भए, राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न पार्ने काम भए । यसको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने, उनको जन्मोत्सव नमनाउने, उनलाई राजतन्त्रको जननीका रुपमा अपव्याख्या गर्दै उनले नेपाल राष्ट्र बनाउन र नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न निर्वाह गरेको भूमिकाको अपव्याख्या गर्दै घृष्णा पैदा गराउने काम राजनीतिक तहबाट भयो । इतिहासको अर्काे पाटो के छ भने लिच्छवीकालमा नेपाल विशाल थियो । मध्यकालमा आएर विशाल नेपाल खण्डित हुँदैगयो र कमजोर भयो । यो भूखण्ड बाइसे–चौविसे राज्यमा विभक्त हुनपुग्यो । तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल रक्षाको आत्मबोध गरी विखण्डित नेपालको पुनः एकीकरण गरे । एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा यो देशको अस्मिता जोगाए । विगतमा पृथ्वीनारायण शाहले विच्छिन्न नेपाललाई एकीकृत गरेर यो देशको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाएका थिए । सो कठिन सत्कार्यका लागि जनताको साथ लिएका थिए ।
यतिखेर नेपालमा राष्ट्रियताको विषय दलअनुसारको फरक र राजनीतिक स्वार्थसंग जोड्ने गरेको छ । नेपालमा राष्ट्रियता बचाउने आन्दोलनले मूर्तरुप लिनै पाएकै छैन । अहिले राष्ट्रिय एकता खलबलिएको अवस्था छ । नेपालको भूखण्ड नै विभाजन गर्ने षड्यन्त्र मच्चिएको छ । देशी–विदेशी शक्तिको षडयन्त्रको शिकार भएका राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयलाई जसरी राजनीतिक स्वार्थमा घोलियो त्यसले मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने खतराहरु कायमै छन् । सवैलाई आ–आफ्नै अधिकार चाहिएको छ । समग्र मुलुकको अस्तित्वसंग कसैले पनि आफूलाई जोड्न चाहेका छैनन् । भाषा, संस्कृति, भेष भुषा जेजस्तो भए पनि हामी नेपाली हौं भन्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । पहिला नेपाली हुने कि मधेसी वा तराईबासी हुने ? नेपाली भएर मात्र हिन्दु, मुसलमान, इसाई, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, मधेसी, सवै रहने हो । नेपालै नरहे त्यो अस्तित्व कहाँ गएर खोज्ने ?
मुलुकभित्र हरेक जातजातिबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कटुतामा परिणत भैरहेको बेला विदेशीले चलखेल गरिरहेका छन् । सीमा मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपको त कुरै नगरौं । सत्तामा बस्दा विदेशी हस्तक्षेपलाई सहयोग ठान्नेहरु विपक्षमा बस्दा त्यसलाई हस्तक्षेप नै हो भन्ने गर्दछन् । सत्तामा रहँदा र नरहँदा राष्ट्रियताको विषय नै फरक हुने गरेको छ । मुलुक संगीन परिस्थितिमा पुगिरहेका बेला राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो । छिन्नभिन्न रहेको नेपाललाई एकीकृत गरी बेलायती साम्राज्यवादबाट बचाएको नेपालको इतिहासको अर्काे पाटो के छ भने पन्ध्र सय वर्ष अगाडि पनि विशाल नेपाल थियो । समयक्रममा विशाल नेपाल खण्डित हुँदैगयो र कमजोर भयो । यो भूखण्ड बाइसे–चौविसे राज्यमा विभक्त हुनपुग्यो । तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल रक्षाको आत्मबोध गरी विखण्डित नेपालको पुनः एकीकरण गरे एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा यो देशको अस्मिता जोगाएका हुन् । अहिले नेपाललाई विच्छिन्न अवस्थामा पु¥याउने, यो देशको सार्वभौम अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव तोड्ने उत्कर्षमुखी गतिविधिहरु निर्देशित रुपमा परिचालित भैरहेका छन ।
तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल रक्षाको आत्मबोध गरी विखण्डित नेपालको पुनः एकीकरण गरे एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा यो देशको अस्मिता जोगाएका हुन् । अहिले नेपाललाई विच्छिन्न अवस्थामा पु¥याउने, यो देशको सार्वभौम अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव तोड्ने उत्कर्षमुखी गतिविधिहरु निर्देशित रुपमा परिचालित भैरहेका छन ।
नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्दैगएको चिन्ता अहिले सर्वत्र जागेको छ । यस्तो चिन्ता उत्पन्न हुनुको पछाडि नेपालका सत्ता प्रतिको मोह राजनीतिक नेताहरुको आन्तरिक राजनीतिक समस्याको निराकरण र परिवर्तनका लागि बाहिरी शक्तिलाई गुहार्ने परनिर्भरतावादी सोच नै प्रमुख कारण छ । देश अहिले परनिर्भरतावादीहरुको चंगुलमा फँसेर अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेपमुक्त राष्ट्रिय चिन्तनधारको राजनीतिक मार्ग अवलम्बन नै सही विकल्प हो । केही समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्यले बिर्सिएको छ तर यो होइन कि जनस्तरमा पनि उनलाई बिर्सिने काम भएको छ । जनयुद्धको १० वर्षे कालखण्डमा तत्कालीन माओवादीले नुवाकोटको देवीघाटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमाथि तोडफोड र बम हान्ने समेत काम ग¥यो, गोरखामा पनि यस्तै काम भए तर ती भत्काइएका शालिकहरु आज पुनः ठडिएका छन् । राज्यले पुनर्निर्माण नगरे पनि जनस्तरबाटै उनीप्रति भावपूर्ण आस्था राख्नेहरुको कमी छैन । यस्तै राजनीतिक स्तरमा एउटा तत्वले बिर्सिए पनि अन्य धेरै पक्षले सम्झिरहेकै छन ।
पछिल्लो समय पृथ्वीनारायणप्रति पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो राजनीतिक जीविका चलाउने संस्कार नेपाली नेतामा विकसित हुँदा नेपाल र नेपालीका लागि आजीवन संघर्ष र बलिदान गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित बनाइएको छ । विदेशी आईएनजीओ र पादरी कर्क प्याट्रिकहरुले लेखेका अनि लगाएका झूटा आरोपहरुलाई तथ्य मानेर पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरका जनताको धार्नीका धार्नी नाक कान काट्यो रे भन्नेहरु आज देशका सत्तामा रहेका छन् । जबकि त्यतिका धार्नी नाक कान हुन पुग्नुपर्ने जनताको संख्या नै त्यतिबेला कीर्तिपुरमा नभएको विद्वानहरुको भनाइ छ । विद्वान् एवं प्राचीन संस्कृति र इतिहासका अध्येता डा. रामेश ढुंगेल भन्छन– पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माण अभियानलाई साम्राज्यवादी राज्यविस्तारका रुपमा एकात्मक ढोल पिट्नु र चित्रण गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार तात्कालिक परिवेश, उनका नीति तथा क्रियाकलापले गर्दा पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजा मात्र नभई राष्ट्र निर्माता तथा भविष्यद्रष्टा युग पुरुषका रुपमा देखिन्छन् ।
पृथ्वीनारायणकालीन समाज आजभन्दा झण्डै तीन सय वर्षअघिको हो ।
त्यतिबेलाको अविकसित कालखण्डमा पनि एकताको आह्वान गर्दै आजको नेपालको परिकल्पना गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सोच र व्यवहारकै उपज आज हामी आफूलाई नेपाली भनेर गर्व गरिरहेका छौँ । उनको उल्लेखनीय योगदानले नै आजको नेपालको सृजना भएको हो । भुरेटाकुरे राज्यलाई विस्तार गरेर अंग्रेजी साम्राज्यको अगाडि कहिल्यै घुँडा नटेकेका पृथ्वीनारायणको साहस नै आजको नेपाली राष्ट्रियता र विश्वमानचित्रमा कोरिएको नेपालको सगौरव नक्साको परिचायक हो । जहिल्यै पनि राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो देख्ने राज्यव्यवस्था मात्रै जनताको लागि उपयुक्त शासनपद्धति हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले उठाएको भाला तरबारलाई कांग्रेसले प्रजातन्त्रअघि उठाएको हतियार र तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म गणतन्त्रका लागि मच्चाएको नरसंहारसँग कुनै पनि हालतमा तुलना गर्नै मिल्दैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको जीवन उपलब्धिमूलक रह्यो, तर एकीकरणपछि उनी ६ वर्ष मात्र बाँचे । त्यही छोटो अवधिमा पनि उनले नेपाली राष्ट्रियताको बलियो जग हाले । एकीकरणकै क्रममा उनले विविध धर्म र साम्राज्यको महत्वाकांक्षा बोकेका आततायीहरुलाई पराजित गरी नेपाललाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले राष्ट्रियताको चौघेराभित्र सुदृढ अस्तित्व दिए । खासगरी धर्म परिवर्तनमार्फत र नेपाली राष्ट्रियतालाई अवमूल्यन या धराशायी बनाउने असफल खेलमा लागेका विदेशीले उनलाई ‘निर्मम र क्रुर’ योद्धाको रुपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन् भावी इतिहासलाई प्रभावित गर्ने गरी र कतिपय नेपाली अध्येता र इतिहासविद्ले त्यसलाई नियोजित असत्य प्रचारको संज्ञा दिएका छन् ।
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउदै आएकोमा गणतन्त्र घोषणा गरेपछी राष्ट्रिय परम्परालाई अन्त्य गर्ने काम भएको छ जसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरु लगायत संघसंस्थाहरु, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका तर्पmबाट परम्परागत रुपमा मनाउन र यस दिनलाई सार्वजनिक विदा घोषित गर्न सरकारलाई दबाब परिरहेको छ ।
नागरिकस्तरबाट पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन दबाब बढ्दै गए पनि लोकतन्त्रमा विश्वाश गर्ने सरकारले भने जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विभिन्न जातिय उत्सव, विदेशीका पर्व चाडहरुमा समेत सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने सरकारलाई सिंगो नेपालका निर्माता पृथ्वीको जन्म जयन्तीमा कुनै कार्यक्रम नगर्ने र सार्वजनिक विदा समेत नदिए पछी जनस्तरबाटै यसको घोर भत्र्सना तथा आलोचना भैरहेको छ । संघियताको नाममा मुलुक विखण्डन तिर उन्मुख भैरहेको वर्तमान अवस्थामा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सान्दर्भिकता बढेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको इतिहासमा विशिष्ट स्थान छन् । उनले नेपाल एकीकरण गरे । युद्धमा जितेपछि पनि हारेकालाई व्यवस्थापन गरी नेपाल राज्यको निर्माण गरे । राजसंस्थाको अन्तपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहप्रति आदर र सम्मानभाव कायमै छ । उनको सम्झनामा देशव्यापी कार्यक्रम गरिदैछ । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरु आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको छ । वि.सं. १७९९ मा नरभुपालको मृत्यु पछि बिस बर्षको उमेरमा पृथ्वी नारायण शाह गोरखाका राजा भएका थिए ।
यिनले नै साना साना राज्यहरुमा विभाजित नेपाललाई एकिकृत गर्न शुरु गरे । हुन त पृथ्वी नारायण शाह अगाडी पनि उपत्यकाका राजा यक्ष मल्ल पाल्पाका राजा मणीमकुन्द सेन तथा जुम्लाका राजा जितारी मल्लका पालमा एकीकरण भएको थियो तर एकीकृत नेपाललाई ती राजाहरुले लामो समय बचाइ राख्न सकेनन । ती राजाले एकीकृत भएको राज्य आफ्ना भाइ छोरा हरुमा आफ्नै जीवनकालका बाडेर थिए ।
मिती ः– २०७७ पौष २३ गते दाङ –सन्दर्भ २९९ औं पृथ्वी जयन्ती